‘कायरा’को दुई दिने कलेक्सन कति ? – Mero Film
‘कायरा’को दुई दिने कलेक्सन कति ?
‘कायरा’ रिलिजको तेश्रो दिन सम्म आइपुग्दा फिल्मले दर्शकको उलेख्य साथ पाइरहेको छ । बर्षाका बाबजुद शनिबार फिल्मको अधिकांश शोहरु हाउसफुल रहे । फिल्म हेर्न आएका दर्शकलाई भेट्न भन्दै फिल्मका मुख्य कलाकार आर्यन सिग्देल र साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह अस्ट नारायण हल पुगेका थिए । फिल्म हेर्ने दर्शकहरुबाट उत्कृष्ट प्रतिकृया पाएको उनिहरुले बताए ।
प्रदर्शनको पहिलो दिन ३४ लाख ६५ हजार भन्दा बढी कलेक्सन गरेको फिल्मले प्रदर्शनको दोश्रो दिन ६२ लाख भन्दा बढी कलेक्सन गर्न सफल भयो । शनिबार उपत्यका बाहिर २४ लाख भन्दा बढी कलेक्सन गरेको फिल्मले उपत्यका भित्र ३८ लाख भन्दा बढी कलेक्सन गर्‍यो । २ दिनको कलेक्सन हेर्दा फिल्मले ९६ लाख ६५ हजार भन्दा बढी कलेक्सन गरेको छ । फिल्म तेश्रो दिनमा करोड क्लबमा प्रवेश गर्ने लगभग पक्का देखिएको छ । यद्यपी तेश्रो दिनको कलेक्सन रिपोर्ट आउन बाँकी छ ।
२०७५ साउन २० गते १४:५० मा प्रकाशित